ခလုတ်ဝတ်စုံ ၂၊ ၃၊ ၄- ခု၏ဂျာကင်အင်္ကျီကိုသင်မည်သို့ဆွဲသင့်သနည်း စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Villamandos | | ပုံ
သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဒီဇိုင်းနှင့်သင့်လျော်သောရှပ်အင်္ကျီနှင့်ကိုက်ညီသောတိုသောဝတ်စုံတစ်စုံသည်လူတိုင်းမိမိအ ၀ တ်တွင်အထူးဖြစ်ရပ်များအတွက်ထားသင့်သောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စကဲ့သို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်ဝတ်စုံတစ်ထည်ကိုဝတ်စရာမလိုသည့်အတွက်လည်းသင်လည်းစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အထူးအခါသမယများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအရာဖြစ်ခြင်းမှထိုအထူးများအတွက်ဝတ်ဆင်ရန်ကြိုးစားသည့်နေ့စဉ်ဝတ်ရုံသို့သွားသည်။ အခါသမယ။
ကြော့ရှင်းနှင့်အတူဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွယ်အစားအတွက်ဝတ်စုံကိုရွေးချယ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဝတ်ဆင်မည့်အပြင်အခြားအဝတ်အစားများကိုလည်းပါ ၀ င်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဝတ်စုံတစ်ခုကိုမည်သို့ခလုတ်နှိပ်ရမည်ကိုသိရန်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးချုပ်လုပ်ပြီးတန်ဖိုးကြီးပြီးအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ပြီးရင်တောင်ဒီဝတ်စုံကိုဘယ်လိုစနစ်တကျတပ်ဆင်ရမှန်းမသိရင်မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
သင်မကြာခဏဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်လေ့မရှိဘဲ၎င်းကိုမည်သို့ချုပ်ရမည်နည်းကိုမသိရှိပါကသင်နေ့စဉ် ၀ တ်ဆင်နေသော်လည်းသင်မည်ကဲ့သို့တွယ်ကပ်ရမည်ကိုသင်တစ်ခါမျှမသိခဲ့ပါ၊ ဤဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးသင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာလိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့်သင်အရာများစွာကိုလေ့လာရန်သွားသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ သို့မှသာသင်ဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်သည့်အခါတိုင်းနှစ်ဖက်လုံး၏ကြော့ရှင်းမှုနှင့်ပြည့်လျှံနေသောအမှန်တကယ်နှလုံးရောဂါနှင့်တူလိမ့်မည်။
1 တစ်ခုချင်းစီကိုဝတ်စုံကိုစတိုင်တလမ်းတည်းအတွက် buttoned ဖြစ်ပါတယ်
2 ရိုးရှင်းသော 1 ခလုတ်အကျီကိုဘယ်လိုခလုတ်နှိပ်ရမလဲ
3 ရိုးရှင်းသော2ခလုတ်ကိုဂျာကင်အင်္ကျီမည်သို့ခလုပ်ရမည်နည်း
4 ရိုးရှင်းသော ၃၊ ၄ ခလုတ်အလွတ်တစ်ခုကိုမည်သို့ခလုပ်ရမည်နည်း
5 6x1 double-breasted ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဘယ်လိုခလုတ်နှိပ်ရမလဲ
6 6x2 double-breasted ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဘယ်လိုခလုတ်နှိပ်ရမလဲ
7 အင်္ကျီအမြဲအပြည့်အဝ buttoned နေကြသည်
တစ်ခုချင်းစီကိုဝတ်စုံကိုစတိုင်တလမ်းတည်းအတွက် buttoned ဖြစ်ပါတယ်
ပဌမ ဝတ်စုံပုံစံတစ်မျိုးစီကိုတလမ်းတည်းဖြင့်ခလုပ်နှိပ်ထားကြောင်းသိရန်လိုအပ်သည် ကွဲပြားခြားနားသော ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ဆရင်သားအကျိတ်ကိုရိုးရှင်းသောအရာကဲ့သို့ခလုပ် နှိပ်၍ မရပါ။
ရိုးရှင်းသော 1 ခလုတ်အကျီကိုဘယ်လိုခလုတ်နှိပ်ရမလဲ
ရိုးရှင်းသော 1 ခလုတ်အကျီများသို့မဟုတ်ဘလိတ်ဇာများသည်၎င်းတို့ကတည်းကအလွယ်ကူဆုံးသောခလုတ်ဖြစ်သည် ကျနော်တို့ကခလုတ်ကိုနှိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်မတွေးချင်တော့ဘူး.
ရိုးရှင်းသော2ခလုတ်ကိုဂျာကင်အင်္ကျီမည်သို့ခလုပ်ရမည်နည်း
ရိုးရိုးနှစ်ယောက်ခလုတ်အကျီင်္ဝတ်စုံသည်လူသုံးအများဆုံးအသုံးအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုသင့်တော်သောလမ်းကြောင်းဖြင့်ခလုပ်နှိပ်လိုပါက၎င်းကိုသတိရပါ ရပ်နေတဲ့အခါသင်ထိပ်ခလုတ်ကိုသာနှိပ်ရမည်, သင်ကဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သာသိသူတုန်လှုပ်စေသောယောက်ျားနှင့်တူချင်တယ်မဟုတ်လျှင်နှစ် ဦး စလုံး။
သင်ခံစားမိပါကအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောခလုတ်ကို unbutton လုပ်ရပါမည်။ သတိရပါ၊ သင်ကဂျက်ဆင်၏ခလုတ်ခလုတ်များနှင့်ဘယ်တော့မှမထိုင်ပါနှင့်၊ ထိပ်ဆုံးနှင့်နှစ်ခုလုံးသည်သင်ကြည့်နေသောအခြားသူများ၏အမြင်တွင်အလွန်ရုပ်ဆိုး။ ထူးဆန်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းသော ၃၊ ၄ ခလုတ်အလွတ်တစ်ခုကိုမည်သို့ခလုပ်ရမည်နည်း
၃၊ ၄ ခလုတ်အကျီနှင့်ဝတ်စုံများသည်လူကြိုက်များလာပြီးမည်သည့်ခလုတ်များကိုမည်သည့်အချိန်၌စွဲကပ်ရမည်ကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်အနည်းငယ်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်သည်သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိဘဲသင်အလယ်တန်းခလုတ်ကိုအမြဲခလုတ်နှိပ်ခြင်းဖြစ်သည်3ခလုတ်နှင့် option တစ်ခုအဖြစ်အထက်ပါခလုတ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်။ အောက်ခြေနှစ်ခု (သို့) ခလုတ်သုံးခုကိုဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်ပါ။
ဂျာကင်အင်္ကျီတွင်ခလုတ် ၄ ခုရှိပါကအလယ်ခလုတ်နှစ်ခုကို နှိပ်၍ သင်နှင့်သင့်တော်ပါကသို့မဟုတ်သင်ထိပ်ဆုံးခလုတ်ကိုလုံးဝကြိုက်နှစ်သက်ပါက မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌သင်သည်ခလုတ် ၄ ခုကိုဝတ်ဆင်သင့်သည်။
ယခင်အမှုများ၌ရှိသကဲ့သို့ ထိုင်တဲ့အခါသင်ခလုတ်ကိုအပြည့်အဝသို့မဟုတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ထူးဆန်းပြီးထိရောက်မှုမရှိသောနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်၎င်းကိုသင်လုံးဝမထိန်းချုပ်ဘဲထားခဲ့လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
6x1 double-breasted ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဘယ်လိုခလုတ်နှိပ်ရမလဲ
၆ × ၁ နှစ်ဆရင်သားအကျိတ်တွင်မြင်နိုင်သောခလုတ် ၆ ခုရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသာခလုတ်နှိပ်နိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျီအများအပြားတွင်မမြင်နိုင်သောခလုတ်တစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ကျနော်တို့စွဲစေနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအပြင်ဘက်ခလုတ်ကိုခလုတ်ကိုရပါမည်.
ဒီနေရာမှာထိုင်ရင်တောင်ဂျာကင်အင်္ကျီခလုတ်နှိပ်ထားရမယ်။ ဒီအကျိတ်နှစ်ထပ်အင်္ကျီများသည်၎င်းတို့အားကောင်းမွန်စွာပြုလုပ် ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကောင်းမွန်စွာသို့မဟုတ်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ထိုင်နေသောအချိန်၌ပင်သဘာဝကျလိမ့်မည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိသောလူကြီးလူကောင်းတစ် ဦး သည်နှစ်ဆရင်သားအင်္ကျီကိုဘယ်တော့မှမဖွင့်ဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်းကိုချွတ်ပစ်မည်မဟုတ်ပါ။ နောက်ထပ်အရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အပူသို့မဟုတ်အဆင်မပြေမှုကြောင့်သေဆုံးခြင်းနှင့်လူကြီးလူကောင်းအနည်းငယ်ဖြစ်ခြင်းကိုမလုပ်လိုခြင်းဖြစ်သည်။
6x2 double-breasted ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဘယ်လိုခလုတ်နှိပ်ရမလဲ
၆ × ၂ ရင်ကျပ်ရင်နှစ်ထပ်အကျီနဲ့ ၆ ပေ× ၆ ခုရှိတဲ့ရင်ထိုးအင်္ကျီနဲ့အတူတူလုပ်သင့်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သောမြင်နိုင်သောခလုတ်နှစ်ခုနှင့်အတွင်းခလုတ်တစ်ခုရှိမည်, ငါတို့ချွင်းချက်မပါဘဲအားလုံးကိစ္စများတွင်စွဲစေရမည်။
ပြင်ပခလုတ်များထဲမှ၊ အထက်ခလုတ်ကိုသာနှိပ်ရမည်၊ ပြီးခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်၌ကဲ့သို့, ဤဂျာကင်အင်္ကျီအမျိုးအစားကျနော်တို့ထိုင်လျှင်ပင်, unbuttoned ဘယ်တော့မှသင့်ပါတယ်။
အင်္ကျီအမြဲအပြည့်အဝ buttoned နေကြသည်
များစွာသောဝတ်စုံများသည်အဖြူရောင်အင်္ကျီတစ်ထည်သာရှိသည် ဖြစ်ရပ်အားလုံး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးခလုတ် မှလွဲ၍ အပြည့်အဝ ၀ တ်ဆင်ရမည် မကောင်းတဲ့ခံစားမှုမပေးဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကခလုတ်မနှိပ်ဘဲဝတ်ဆင်ရမယ်။
အင်္ကျီကိုအပြည့်အ ၀ မဖွင့်ပါ၊
ဒီဟာတွေဟာဝတ်စုံကိုခလုတ်နှိပ်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းတွေပါ။ မူးနေတဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ဖက်ရှင်လှုပ်ရှားနေတာကိုး။ အကယ်၍များ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ဒီ post ထဲကနေရာလွတ်ကိုသုံးပြီးမှတ်ချက်များအတွက်မှတ်ချက်ပေးရန်သင်၏မေးခွန်းများကိုမေးရန်မည်သို့သင်ရမည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » သင့်ဝတ်စုံကိုဘယ်လိုခလုတ်ခုံ?
11 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
လွန်ခဲ့တဲ့ 14 အနှစ်
ငါထင်တာကဖက်ရှင်တစ်ခုပဲ။ protocol တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ဒါဟာတကယ်အရေးမကြီးဘူးဆိုရင်ဒီအချက်ကိုရှင်းပြနိုင်မလား။
အဲဒါဟာသဟုတ်လား ?? ဘယ်လူရွှင်တော်လဲငါခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရယ်မိတယ်။
ဆင်းရဲသောသူ! သနားစရာပဲ! ထို့နောက်သူတို့ကဝါဂွမ်းအားကစားခြေအိတ်သို့မဟုတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောလည်စည်းဝတ်ဆင်ကြသည်မဟုတ်လျှင်, ကျွမ်းကျင်သူသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ချက်ကိုမေးပါ, "သူတို့ကိုလမ်းပြ" သောပထမ ဦး ဆုံးမျောက်အမြဲမယုံကြည်ကြဘူးအခြားသူများအဘို့အခလုတ်ရှိသမျှတို့ကိုဆွဲထားနှင့်အတူအချို့သောကြည့်ဖို့ရှက်စရာဖြစ်ပါတယ်။
အနတ္တ၊ ၃ ခလုတ်ပါသောတစ်လုံးကိုကျွန်ုပ်ဝယ်မည်။ နောက်တစ်ခုကိုသာဆွဲလိမ့်မည်။ နောက်ထပ် ၂ ခလုတ်ကိုသင်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်ကအကောင်းဆုံး hahaha ဖြစ်ကြသည်
4 ခလုတ်ကို Blazer, ကပစ်? မင်းကထိတ်လန့်တယ် !!! ဖောက်သည်များ ၀ ယ်ရန်နှင့်စွန့်ပစ်ရန်အတွက်ခလုတ် ၄ ခုနှင့် Boss ယူရို ၇၀၀ ကို Boss ပြုလုပ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ အနည်းငယ်အရူး update ကိုသွား!
ကျွန်ုပ်သည်ပရိုတိုကော၏ပရိသတ်ကြီးမဟုတ်ပါ၊ သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင်အမေရိကန်တစ်ယောက်ရှိပါက၊ သင်ဤအချက်ကိုလိုက်နာရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ခြေနင်းခြေကသာမကသာမကအခြေအနေတစ်ခုစီကိုသတိပြုရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုပါသည်။
4 ခလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဟာခေတ်စားနေမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုသင်မဖယ်ရှားသင့်ဘူး။
အားကစား ၀ တ်စုံများ ၀ တ်နေသည့်ခလုတ်များကိုညည်းညူဝေဖန်သူများအားတောင်းပန်ပါ၏ ၂၄,24,7,365,၃၆၅ ၀ တ်စုံကိုမသိဘဲတစ်စုံတစ် ဦး ကို ၀ တ်ဆင်သည်ကိုတွေ့ရခြင်းသည်ရှက်စရာဖြစ်သည်။ သင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုမသိလျှင်၎င်းကိုမဝတ်ပါနှင့် !!!
အောက်ပိုင်းခလုတ်များကိုဘာကြောင့်မတပ်ထားတာလဲဆိုတာကိုတစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုရှင်းပြပေးနိုင်မလား။ သူတို့မဆွဲနိုင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ ၎င်းကိုသိသူများအားခွဲခြားခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးခြင်းများကိုတစ်ခုတည်းသောသာဓကဖြင့်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောအုပ်ချုပ်မှုကိုတည်ထောင်ခြင်း မှလွဲ၍ ထိုကဲ့သို့အနိုင်ကျင့်ခြင်းအတွက်လက်တွေ့ကျသို့မဟုတ်ဆင်ခြင်တုံတရားအကြောင်းပြချက်ရှိပါသလား။ အရူးအမူးစွဲလမ်းတဲ့လောကကြီး၊ ငါတို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့ရတယ် ... ဒီဟာကိုလှပပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အထင်ကရအမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကမ္ဘာကနေအထည်တစ်ထည်အလှည့်အချွတ်အချွတ်အဖြစ်ရှုမြင်ခံရပေမယ့် (အခုတော့ငါကဒီအဝတ်အစားကိုဝတ်နေတယ်), မျှော်လင့်ထားရန်ကျန်သည့်အရာ ...
ဟုတ်တယ်၊ အနိမ့်ခလုတ်များချိတ်ထားခြင်းဖြင့်ဝတ်စုံကိုခေါက်။ silhouette နှင့်မကိုက်ညီစေပါ။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုများစွာကန့်သတ်ထားသည်။ သင်ရွှေ့လိုက်သည်နှင့်သင်ဝတ်စုံကိုခေါက်လိုက်လိမ့်မည်။
၀ တ်စုံသည်လှပသောဝတ်စားဆင်ယင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းပြည့်စုံကောင်းမွန်ရမည်။ သင်သည်တွန့်သောသို့မဟုတ်ခေါက်ထားသည့်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်။ မရပါ။